Blue Galaxy (Inya Branch) | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Blue Galaxy (Inya Branch) | Kamayut
Blue Galaxy စားသောက်ဆိုင်ကို ၂၀၁၅ခုနစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ကို အပြာရောင်များနှင့် အလှဆင်ထားပြီး ဆိုင်အတွင်းမှာ ထိုင်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးစားသောက်နိုင်သလို ဆိုင်၏အပြင်ဘက်မှာလည်း စားသောက်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါအပြင် သောကြာနေ့ နှင် စနေနေ့တွေမှာ ပရိသတ်များအတွက် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် Live Entertainment ကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဆိုင်မှာ ကျယ်ဝန်းသောကြောင့် Group Party ပွဲများကိုလည်းလက်ခံကျင်းပပေးပါတယ်။
ထမင်း နှင့်ဟင်းလျာ | ဟော့ပေါ့ | အီတလီစတိုင်ခေါက်ဆွဲ | ဟမ်ဘာဂါ | တုံယမ်း ဟင်းချို | အသားကင်
ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် | ပြင်ပ သို့ယူဆောင်သွားနိုင်သည်။ | ကားရပ်ထားရန်နေရာ | လေအေးပေးစက် | တီးဝိုင်း
Pyay Rd. & Inya Rd. Corner, Inya Lake Park, Kamaryut Tsp., Yangon.
အနီးအနား တံတားဖြူ မှတ်တိုင် 10 မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်